White Kitchen Faucet Na Pụpụ Sprayer
Home / Faucets kichin / WOWOW White Kitchen Foset Wet ala
WOWOW White Kitchen Faucet Pọt
Uclọ eji esi nri kichin na-acha ọcha nwere ọdịdị ọhụụ na nke ọhụụ, yana mmetụta nke mgbochi na nchara.
Nnukwu akwa arc kichin EVE-0071-white na-eweta ụdị dị mma ma dị mfe. Udiri dị larịị ma na-egbuke egbuke na-agbakwunye ọmarịcha ihe dị mfe na ọnọdụ kichin gị dị. Ihe a na-eji aka ya dị larịị na-eme ka ọ dị mfe ijikwa ọ̀dịdị ahụ na -efe, yana ọcha na-agbakwunye ịke na ụdị. Thekpụrụ ntụgharị ya na ọrụ abụọ na-eme ka arụmọrụ dị mma ma gboo mkpa dị iche iche na isi nri. Ucgbọ mmiri a bara uru ma mara mma na-eme ka kichin gị pụọ iche.
Dual-function spray head with push button switch: A na-eji ọnọdụ mmiri na-agba mmiri maka ọgwụ mmiri, a na-eji ọnọdụ ịgba agba maka flushing, kwụsịtụ iji zere ịgba. Ahụ siri ike, ọla kọpa na-enweghị ndu, ogo dị elu, ọgwụgwọ na-eguzogide ọgwụ na-acha ọcha. The seramiiki diski valvụ karịa ụlọ ọrụ ndụ ọkọlọtọ, huu anwụ ngwa ngwa nke ọrụ ndụ. Nwere ike nweta akara mmiri kachasị mma. The ngwugwu na-agụnye niile arịọnụ ngwaike, oyi / ọkụ ọkọnọ edoghi na foset ahụ. Tupu ibupu, anyị ga-enyocha ngwaahịa niile iji hụ ogo ngwaahịa a. Echegbula onwe gị banyere ịzụ.
SKU: EVE-0071-ọcha Category: Faucets kichin Tags: Faucets kichin, Wetuo
1 n'arọ = 2.2046 lb = 35.2740 oz
WOWOW Chrome kichin wepu faucet na mpịpụ ...
WOWOW Azụmaahịa ite dị na Kettle Cucme
WOWOW Top gosiri agbada na kichin faucets Singl ...